घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक फुटबल प्रतिभाशाली नाम प्रस्तुत गर्दछ "जापानी मेसी"हाम्रो टेकफुसा कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या्कहरू तपाइँको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
टेकफुसा कोबो बचपन कहानी- आजको विश्लेषण। रियल म्याड्रिड फ्यानहरूमा क्रेडिट।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उज्जवल बायाँ खुट्टा, अत्यन्त नजिकको नियन्त्रण र लक्ष्यका लागि आँखा, उसलाई किन उपनाम दिइएको छ भन्ने कारणले उनी धन्य हुन्।जापानी मेसी'। जहाँसम्म, केवल केहि ले टेकफुस कुबोको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
टेकफुसा कुबोको जन्म जूनको 4th दिनमा,4जून 2001 आफ्ना आमा बुबामा भयो; उनको बुबा टेकफुमी कुबो र आमा औद्योगिक शहर कावासाकी, जापानमा।
टेकफुस कुबो आफ्ना बुबासँग। वर्ल्डस्पोर्टहोलिकमा क्रेडिट।
टेकफुसा कोबो एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। उसको परिवारको उत्पत्ति जापानी शहर कावासाकीबाट भएको हो, जुन आफ्नो बेसबल, क्षेत्र एथलेटिक्स, फुटबल, इनडोर सुविधाहरू, साइकल र घोडा दौडका लागि प्रख्यात छ।
टेकफुसा कोबो परिवार उत्पत्ति।
सार्वजनिक डोमेन बाट प्राप्त रिपोर्टले टेकफुस आफ्ना भाई आमा वा बुबाको एक मात्र बच्चाको रूपमा हुर्काएको छ, कुनै भाई (हरू) वा बहिनी (हरू) छन्।
एक खेल मायालु बुबाको वरिपरि हुर्किएको र एक फुटबल पागल शहर मा बस्ने उनको एक सुन्दर खेल को लागी माया मा एक प्रवृत्ति पैदा भयो। चाँडै उसले बलमा क्रुज नियन्त्रण क्षमताको साथ स्वभाविक रूपमा प्रतिभाशाली भएको देखे।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
धेरैजसो परिवारले आफ्ना बच्चाहरूलाई शिक्षा र जापानमा गैर-खेलको रोजगारी खोज्ने दृष्टिकोणले हुर्काए पनि टेकफुसा कोबोका बाबुआमाले उनीहरूको छोराले कुनै कुराको लागि फुटबल शिक्षामा सम्झौता नगर्ने कुरामा जोड दिए।
सात वर्षको उमेरमा, टेकफुसा कुबोले आफ्नै घर कावासाकीमा रहेको स्थानीय एकेडेमी एफसी पर्सिमोनका लागि फुटबल खेल्न शुरू गरे।
उनको प्रदर्शनले उनलाई उनको क्षेत्रका अन्य प्रतिष्ठानहरूले ठूलो माग गरेको देख्यो, 2008 मा टोकियो भर्दी र एक्सएनयूएमएक्समा कावासाकी फ्रन्टेलमा सर्न प्रेरित गरे। यस समयमा उनले युरोपियन एकेडेमी फुटबलको सपना देख्न थाले।
त्यस बेला, उनको एकेडेमीका उनका शिक्षकहरूलाई थाहा थियो कि टेफुसा कोबो ठूलो चीजहरूको लागि निर्धारण गरिएको थियो किनकि तिनीहरूले उसलाई कुनै अन्य बच्चा फुटबलर जस्तो नभई आफ्नो सीपहरू सान बनाएको देखेका थिए। त्यसोभए जब उनले एफसी बार्सिलोनासँग जोडिएको शीर्ष जापानी क्लबसँग ट्रायलमा भाग लिन कलअप प्राप्त गरे, तिनीहरूको गर्वको कुनै सीमा थिएन।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - युरोपमा प्रारम्भिक क्यारियर जीवन
खेलको लागि टेकफुसाको उत्कटताले उनलाई एकेडेमी परीक्षणहरू पार गर्यो र जापानको जापानी एफसी बार्सिलोनाको फुटबल क्याम्प फ्रान्चाइजी टोलीमा सामेल भयो। उनले खेलाडीको रूपमा आफ्नो खेल्ने शैली बनाए जुन उनीहरू विगतका विपक्षीहरूलाई उनीहरूको जस्तै अस्तित्वमा पुर्‍याउन सक्थे।
अगस्त 2009 मा, टेकफुसा कोबोलाई एक प्रतियोगिताको लागि MVP बाट सम्मानित गरियो जसमा उनले आठ वर्षको उमेरमा भाग लिएका थिए।
Takefusa Kubo- एफसी बार्सिलोना फ्रेंचाइजी एकेडेमी संग प्रारम्भिक क्यारियर वर्ष।
ऊ त्यहाँ बसिएन। कम्तिमा एक वर्ष पछि, अप्रिल 2010 मा, उनी पनि बेल्जियममा आयोजित सोडेक्सो यूरोपीय रुसास कपमा भाग लिन एफसी बार्सिलोना स्कूल टीमको सदस्यको रूपमा योग्यतामा चयन भए।
तपाईंलाई थाँहा थियो? टेकफुसा कोबोलाई यस टूर्नामेन्टमा अर्को MVP बाट सम्मानित गरियो। धेरै मानिसहरूले यसलाई संकेतको रूपमा देखे जुन उहाँ टाढा जान लाग्नुहुन्छ।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सडकको प्रसिद्धि कथा
एफसी बार्सिलोना प्रसिद्ध युवा एकेडेमी, ला मासिया जापान मा आफ्नो उपलब्धिहरु लाई ध्यान लिए। अगस्त 2011 मा, एकेडेमीले उनलाई युरोपमा परीक्षणको लागि आमन्त्रित गर्‍यो जुन उनले उडान र colorsहरूमा परीक्षण पार गरे। स्वीकृतिमा, तिनीहरूले उसलाई बार्का एलेविन सी (U11) सुरू गर्न अनुमति दिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… आफ्नो पहिलो पूर्ण सीजनको अवधिमा (2012 – 13), टेकफुस जुनियर लिगमा शीर्ष गोल स्कोरर थिए जसलाई 74 खेलहरूमा 30 गोलहरू दिए।हो, तपाईंले त्यो सही पाउनुभयो!)। भिडियो प्रदर्शन को एक टुक्रा तल उसको प्रदर्शनको आधारमा खोज्नुहोस् जहाँ उहाँ निम्बल मार्फत बहु विपक्षी एयरफुटबोलमा क्रेडिट।
भिडियो हेरेपछि, हामी निश्चय छौं कि तपाईं सहमत हुनुभयो कि टेकफुस कोबोलाई उपनाम किन दिइयो भनेर हेर्न सजिलो छ।जापानी मेसी'। यो लेख पढे पछि एक टिप्पणी राख्नुहोस् हामीलाई आफ्नो विचारहरु भन्न।
2014 – 15 सिजनको समयमा, टेकफुसा कोबोलाई बार्का इन्फान्टिल ए (U14) मा पदोन्नती गरियो। यस समयमा, उनको ड्राइभ र अठोट उनको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति भयो। टेकफुसाको खेल्ने शैली मुस्टangको इन्जिनसँग मिसिएको रोल रोयसको भव्यता जस्तै थियो। सबैले उसलाई पाएको देखे लिओनेल मेस्सी विशेषता बल बनाउँछ कसमा जोडिएको वा जोडिएको उसको खुट्टा। एउटा चीज टेकफुसा कोबोले मन पराउने खेलाडीहरू लिएर गइरहेका थिए जो उनी भन्दा ठूला र ठूला थिए।
टेकफुसा कुबो- फेम कथाको लागि रोड। AquaVista लाई क्रेडिट।
वर्ष 2015 को अन्त्यमा, बार्सिलोना को माइक्रोस्कोप अन्तर्गत आए फिफा नियमहरू तोडे पछि उनीहरूको युवा टीममा खेलाडीहरू हस्ताक्षर गर्दा।
टेकफुसका लागि, पहिलो टीमको बाटोले दर्दनाक नाटकीय मोड़ लिए जब एफसी बार्सिलोना एकेडेमी द्वारा हस्तान्तरण प्रतिबन्ध हस्तान्तरण गरियो फिफा केको लागि स्थानान्तरण अनियमितता भनिन्थ्यो। क्लबलाई टाकाफुस कोबोमा हस्ताक्षर गर्न निषेध गरिएको थियो यसैले बार्कालाई उनलाई क्लबबाट बाहिर निकाल्ने आधिकारिक आदेश दिए।
सुरुमा कुबोले अन्तिम केही महिना स्पेनमा फूटबल न खेलेकोमा बिताए जसले गर्दा उनी डिप्रेसनको सामना गरिरहेका थिए। यससँग प्रशस्त भएपछि, उनले क्लब छोडेर आफ्नो मूल जापान फर्कने निर्णय गरे। जापानमा छँदा, कोबोले FC टोक्यो युवा टीमको साथ नयाँ युवा सुरुवात गरेका थिए।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
जापानमा टेकफुसा कोबो अझै पनि हाई प्रोफाइल यूरोपमा फिर्ता सार्ने दृढ संकल्प थियो, यस पटक, कहिल्यै एफसी बार्सिलोना संग जो उनलाई निराश। एफसी टोयोको बखत, विचित्र प्रतिभा क्लबको वरिष्ठ टीममा बढायो, जुन उनका अभिभावकको लागि गर्वको क्षण हो।
टेकफुसा कोबो एफसी टोकियोमा फेम कथामा उत्रे।
जापानी लिगमा वरिष्ठ फुटबल खेल्ने क्रममा टेकफुसाले रेकर्ड तोड्न शुरू गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनी जे-लिग ईतिहासको सबैभन्दा कान्छी खेलाडी र सबैभन्दा कान्छो गोल स्कोरर भए। यो उपलब्धि क्लब फुटबलको उसको व्यावसायिक चरणमा उसको आगमनलाई चिन्ह लगायो।
युरोपको लागि स्थायी यात्रा:
टेकफुसा कोबोको उपलब्धिले उनलाई म्यानचेस्टर सिटी, बायरन म्यूनिख र पेरिस सेन्ट-जर्मेनको रडारमा आइरहेको देख्यो जसले उहाँलाई आफ्नो शानदार बायाँ खुट्टा, जबरदस्त नजिकको नियन्त्रण र गोलको लागि आँखाको लागि धन्यवाद दिन चाहेका थिए। सुरुमा एउटा एफिसी बारियलोनालाई उनी सुरक्षित रूपमा फिर्ता जानको लागि एउटा सम्झौता गरिएको थियो र त्यसबेला उनले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि घुँडा टेक्न थाले।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… टेकफुसाले यसको प्रतिद्वन्द्वी, रियल मैड्रिडमा सर्ने पक्षमा एफसी बार्सिलोनाको फिर्तीलाई जोरदार साथ अस्वीकार गरे। घाउहरूमा नुन दलाउन, टाकाफुसा कोबोले उनको एफसी टोकियोबाट साइन इन गर्न रियल म्याड्रिड मात्र £ 1.78m खर्च गरे।
टेकफुस रियल म्याड्रिडमा सम्मिलित हुँदै।
Takefusa Kobo लेखन को समय को रूप मा तयार छ विश्वलाई प्रमाणित गर्नुहोस् कि उनी जापानी फुटबल पुस्ताको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञ हो देशको लिजेन्ड हिडेटोसी नाकाता पछि। अब, बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो.
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सम्बन्ध जीवन
उनको प्रसिद्धिमा र रियल म्याड्रिडमा सम्मिलित हुँदै धेरै प्रशंसकहरूले प्रश्न सोधेका छन्; टेकफुसा कोबोको प्रेमिका वा डब्लूएजी को हो?.
टेकफुसा कोबोको प्रेमिका को हो? - ट्रान्सफरमार्कटमा क्रेडिट।
लेख्ने समयमा, टेकफुसाको सम्भावित लुकेका रोमान्सहरू एक हुन् जुन सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्छ केवल किनकि उसको प्रेम जीवन निजी हो र सम्भवतः नाटकमुक्त छ। यस्तो देखिन्छ कि टेकफुसाले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाएका छन् र आफ्नो निजी जीवनमा कुनै स्पटलाइटबाट बच्न खोजेका छन्। यो तथ्यले ब्लगर्सलाई टेकफुसा कोबोलाई जीवन र डेटि love इतिहास मन पराउने जान्न गाह्रो बनाउँदछ।
जे होस्, उसको युवा उमेर र विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्लबले अधिग्रहण गरेको कारण जुन युवालाई माफ गर्न सकिदैन जो प्रभावित गर्न सक्दैन, यो सम्भव छ कि टेकफुसा अविवाहित हुन सक्छ र कसैलाई डेट नगरेको हुन सक्छ। यद्यपि हामीले उसको उमेरका युवाहरूलाई डेटि see गरेको देख्छौं, त्यसकारण हामी अनुमान गर्न सक्दछौं कि उसकी एक प्रेमिका होला तर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु नै राम्रो हुन्छ।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - व्यक्तिगत जीवन
टेकफुसा व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई खेलको पिचबाट टाढा उहाँको व्यक्तित्वको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
फुटबल दृश्यबाट टाढा, टेकफुस गणनात्मक, कोमल, स्नेही, प्रेरणादायक, कहिल्यै बोरिंग गर्ने छैन र वातावरण र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न द्रुत रूपले अनुकूलन गर्ने र सिक्ने क्षमता राख्दछ।
टेकफुस कुबो व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू। BeSoccer लाई क्रेडिट।
टेकफुस कोबो सधैं संसारसँग मोहित हुन्छन्। ऊ एकदम जिज्ञासु छ, लगातार भावनाको साथ कि उनलाई म्याड्रिडका प्रशंसकहरूलाई आफू कति राम्रो छ भनेर प्रमाणित गर्न पर्याप्त समय चाहिएको छैन।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक जीवन
टेकफुसा धेरै सामाजिक छ र साथीहरू र परिवार, विशेष गरी युवा सदस्यहरूसँग समय बिताउन मन पराउँदछ। परिवार उनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र समय खर्च गर्न तिनीहरू संग एक बलियो भावनात्मक सम्बन्ध बनाउँछ।
टेकफुस कुबो पारिवारिक जीवन।
मिडियाले उसको बुवाको विवरण लिने गरेको छ भने, उनको आमाको बारेमा थोरै जानकारी रहेको छ। यो मानिन्छ कि टेकफुसा कुबोको आमा छ सार्वजनिक मान्यता खोज्न को लागी एक सचेत छनौट गरे।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - LifeStyle
व्यावहारिकता र रमाईलोको बीचमा निर्णय लिनु वर्तमानमा टेकफुसाका लागि गाह्रो विकल्प होईन।
यद्यपि उनी विश्वास गर्दछन् कि फुटबलमा पैसा कमाउनु एक आवश्यक दुष्ट छ। टेकफुसासँग कडा आधार छ कि कसरी उनले आफ्नो फाइनान्सलाई चेक र व्यवस्थितमा राख्ने। लेख्ने समयमा जस्तै, उहाँ ग्लैमरस जीवनशैली बिताउनुहुन्न जुन मुठ्ठी महँगो कारहरूले सजिलै देख्न सक्ने छ।
टेकफुसा कोबो जीवनशैली तथ्यहरू। लक्ष्यमा क्रेडिट।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - अनियमित तथ्यहरू
वर्ष टेकफुसाको जन्म भएको थियो: निम्न घटना भयो;
त्यो वर्ष, ठीक सेप्टेम्बर 11, 2001 मा, जुन9/ 11 आक्रमण भनेर चिनिन्छ। उन्नीस अपहरणकर्ताहरू एकै साथ न्यु योर्कको म्यानहट्टनस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा दुईवटा विमान दुर्घटनाग्रस्त चार अमेरिकी घरेलु वाणिज्यिक एयरलाइन्सको नियन्त्रण भयो।
वर्ष 2001 "को रूपमा चिनिन्थ्योशार्क वर्ष को गर्मी“। यो वर्षले सार्क आक्रमणको ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढी संख्या रेकर्ड गरेको छ।
त्यो वर्ष 2001, विश्वभरका फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरू अफ्रिकाको न्यून लागत मूल्यमा एड्स औषधि बेच्न सहमत गर्दछन्, घातक रोगको बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्न 90% सम्म छुट।
त्यस वर्षको जनवरीको 26th मा, रिचर स्केलमा 7.9 मापन गरिएको जंगली भूकम्पले भारतको गुजरातलाई झकझकायो, लगभग 20,000 मान्छे मारिए र अरु 167,000 घाइते भए।
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो टेकफुसा कोबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
विनीसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 6